Europe kuti Best Christmas Markets By Train | Save A Train
musha > Travel Europe > Europe kuti Best Christmas Markets By Train
Christmas Markets nechitima kunokubatsira kupinda Krisimasi mweya ine rwendo kune rimwe remaguta Europe yepamwoyo. Travel nechitima uye kuti ruzivo rwako kupfuura mashiripiti nokusingaperi! zhinji nhepfenyuro dziri mumwoyo peguta, kuita rokufambira nechitima nyore nzira kusvika kwauri kuenda. Ungave uri kuenda tenga kuti zvipo mhuri, Mharidzo yacho mulled waini, kana kuti vanongonakidzwa Krisimasi muchadenga pamwe vaunoda, wava nechokwadi kuti chisingakanganwiki zororo. Takaita vakanyora zvishomanana Europe yepamwoyo Christmas misika nechitima kuti murege kurasikirwa.
Chimwe chezvinhu mashiripiti nguva gore kushanyira Italy munguva Christmas nguva. Tora chitima kuna Florence uye kuona zvivako yekare dzakavhenekera pamwe Christmas magetsi uye hwema roasting chestnuts mudenga.
Milan kuna Florence Zvitima
Rome kuna Florence Zvitima
Naples kuna Florence Zvitima
Venice kuna Florence Zvitima
View pambiru iri Instagram
A mumhanyi vakagoverana ne ⓒⓗⓘⓒⓐⓢenvoyage (@chicasenvoyage)
A dzakakurumbira kumusika pandaishanyira Florence ndiye Piazza Santa Croce muna Florence. Izvi izere runako emapuranga zvidyiro zvamabhiza uye inozivikanwa nokuva chinyakare German Christmas musika. Piazza Santa Croce ndiyo nzvimbo akakwana tonotora zvipo akasiyana uye omunharaunda zvinonaka.
Kutanga ichi Christmas Markets nechitima aine chitima rwendo kuLondon. London rizere Christmas moyo kubva November kusvika January. Shanyira London kwakaita yechando inoshamisa panguva Hyde Park uye ona nemiti yakashongedzwa upenyu hwaAbhigairi zviedza, yakakura panze Skiing Rink, mumwe Ferris vhiri, Carol vaimbi uye zvakawanda mukati pamusika. Kune misika zhinji madiki kusarudza kubva kumativi London National History miziyamu apo iwe unogona angadziyirwa muna Crisp chando mhepo ine girazi glühwein uye zvimwe zvokudya pamitambo. Plus, ne naka chitima fares kuLondon, iwe uchava mamwe mari mamwe kunotenga!
Kuenda enchanted Christmas misika nechitima!! Berlin nyore nokuda chitima mu Europe izvo zvinoita kuti akakwana rwendo. Discover akapfuma uye zvinonakidza nhoroondo guru German kuti, uyewo avo siyana Christmas misika, nezvakanakisisa pamwaka kunotenga, zviitiko, uye culinary zvinofadza!
Munich kuna Berlin Zvitima
MuFrankfurt kuna Berlin Zvitima
Hanover kuna Berlin Zvitima
Hamburg kuna Berlin Zvitima
Tsamba yakagovaniswa naLouise Liljestrand (@louiseliljestrand)
Gendarmenmarkt ndeye inofanirwa-kuona! setup Izvi kuzivikanwa somumwe zvikuru wakajeka kweBerlin raMwari Christmas misika. Ngazvirege kutongoravira zvimwe inobata vemo akadai gingerbread, rakagochwa chestnuts, mulled waini, uye masoseji ekupedzisira German Christmas ruzivo.
Kusiyana nevamwe misika yakakura muEurope, the Prague Christmas Markets by Train offers more authenticity and comfort. musika Mumwe ane chisingakanganwiki mhepo. Maminetsi kubva kuchiteshi chechitima chepakati pane dzimba dzakashongedzwa zvakajeka dzemapango paPrague Old Town square. Pano veko uye vashanyi vaunganire stocking fillers, matoyi emapuranga, Christmas muti zvishongo, chishongo ruoko-yakaitwa, uye zvemiti inonhuhwirira makenduru.
The kusarudza zvokudya uye zvinwiwa kutengeswa pamusika zvikuru norupo. Vaenzi vanogona kutarisira Czech zvetsika chikafu sezvo nina yenguruve, Czech muffinit, conkers, doro, mull, uye zvimwe zvakafanana unyanzvi kubva Old Czech chili. Pane chinhu chinokosha chaizvo pamusoro Christmas pamusika muPrague. Follow tiri Twitter uye Facebook kuchengeta ziso nokuda kwedu Latest zvinowanika.
MuFrankfurt kuna Prague Zvitima
Munich kuna Prague Zvitima
Berlin kuna Prague Zvitima
Vienna kuna Prague Zvitima
Nakidzwa nekutambura kweguta nechitima kumafaro Vienna! Vienna ndiro guta zvomunguva yakapfuura uye rudo uye anopa yakanakisisa paKrisimasi Markets mu Europe. The chiteshi chechitima ndiyo chete kwemaminitsi nokuda tekisi kana bhazi kubva peguta inoita Vienna raMwari Christmas Markets nechitima nyore kusvika. The kupfuura mukurumbira musika muguta rino guru paruchaitika Rathausplatz, apo pachivara iri yakanyatsojeka ne twinkling mwenje waro yevedza Christmas muti.
Salzburg kuna Vienna Zvitima
Munich kuna Vienna Zvitima
Graz kuna Vienna Zvitima
Prague kuna Vienna Zvitima
Edza mashoko zvinonaka yepanchi uye chinyakare zvihwitsi sezvo ukatarira paimba kuti kungomira pakati pokushanda kwayo nezvipiriso uye zvemaoresa, uyewo manheru oga oga rarama makonzati ehwamanda anoteererwa kubva Rathaus nhurikidzwa, ichi chinhu chikuru nzira yokugumisa zuva akakwana.
Ita ichi Christmas munhu kuyeuka kushanya kune rimwe muEurope kunoshamisa Christmas misika nechitima. Book tikiti renyu paIndaneti kushandisa yendege Finder uye kuti mari zhinji pachine.
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, zvino tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-christmas-markets-by-train%2F%3Flang%3Dsn - (Mupumburu pasi kuona Embed Code)
Kana uchida kuva nomutsa vanoshandisa dzenyu, unogona kuvatungamirira zvakananga kunyika yedu mapeji kutsvaka. In batanidzo ichi, muchawana yedu rinofarirwa kupfuura chitima pakutengeserana – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Inside uine Links edu Chirungu kumhara mapeji, asi isuwo tine https://www.saveatrain.com/es_routes_sitemap.xml, uye iwe unogona kuchinja / kes kuti / kana / of uye mimwe mitauro.
#musika #newyear #noel Kisimusi KisimusiTrain
Ndiri zvakaoma kushanda uye vaneshungu nomumwe kwemakore akawanda zvose digitaalinen yokutengesa uye voruzhinji ukama. Apfuura nhamba yemakore, I vakakurira unyanzvi angu munzvimbo kufamba pamwe uye saka akatanga kunyora kugutsikana saka vanhu vanogona nyika yedu zvikuru sezvandiri. - Unogona baya pano ndibate
Rovedza Kufamba Austria, Rovedza Kufamba Britain, Train Travel Czech Republic, Rovedza Kufamba France, Rovedza Kufamba Germany, Rovedza Kufamba Italia, Chitima Kufamba Russia, Rovedza Kufamba Spain, Chitima Kufamba UK, Travel Europe
Rovedza Kufamba Austria, Rovedza Kufamba Britain, Rovedza Kufamba France, Rovedza Kufamba Germany, Train Travel Holland, Rovedza Kufamba Italia, Train Travel The Netherlands, Chitima Kufamba UK, Travel Europe
Best Cross Border Anorovedza kutora In Europe
Rovedza Kufamba Belgium, Rovedza Kufamba France, Rovedza Kufamba Germany, Train Travel Holland, Rovedza Kufamba Italia, Rovedza Kufamba Spain, Chitima Kufamba Switzerland, Travel Europe
10 Kamwe In A Hupenyu Kwekuenda
12 Nzvimbo Dzakanaka Kwekutanga Kwevafambi
12 Best Girls Rwendo Dzekuenda Munyika Yose
12 Matemberi Akawanda Ekare Munyika Yose
12 Nzvimbo Dzakanaka Kune Vanoda Kuzvimiririra